★★★ I-Sunny City Pad ★★★ - I-Airbnb
★★★ I-Sunny City Pad ★★★
Itholakala phakathi nohambo lwezinyawo lwemizuzu engu-5 enkabeni ye-Art Deco City edumile emhlabeni yase-Napier futhi uhambo olufushane oluya edolobhaneni eliseceleni lolwandle lase-Ahuriri, leli khaya lesimanje lokuklama liyindawo ekahle kakhulu yedolobha.
Leli khaya elilungiswe ngokuphelele linendawo yokuhlala evulekile enelanga, ikhishi lesimanjemanje lomklami, igumbi lokugezela nelondolo kanye negceke/indawo yokosa.
- Indawo emaphakathi -
Ikhaya lesimanje elihlanzekile
nelicocekile - Ukuhambahamba imizuzu engu-5 ukuya e-Central
Napier - Isistimu YE-SONOS -
- Ikhofi le-Nespresso
Leli khaya lika-1950 elilungiswe ngokuphelele futhi lalungiswa ngendlela yesimanje lilungele impelasonto e-Napier noma ngaphezulu.
Ikamelo ngalinye lihlotshisiwe kuhlanganise nelineni yekhwalithi emakamelweni okulala.
Ifenisha yomklami, izitshalo zangaphakathi kanye nemidwebo kukwenza uzizwe sengathi usehhotela eliphakeme, ngeke ufune ukuhamba.
Indlu inezitsha zokupheka, ifenisha yangaphandle kanye ne-BBQ. Phawula ukuthi asinayo i-microwave.
Indlu inama-Netflix TV amabili, isistimu yomsindo we-Sonos engenantambo nokuxhumeka ku-inthanethi kwe-fylvania. Bheka imanyuwali yendlu yokuthi ungaxhuma kanjani.
Uhambo lwe-Bluff Hill
Uma unesithakazelo sokuhamba eduze kwendlu sicela ubone
4.85 · 398 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-398
Umgwaqo we-Cameron ungomunye wemigwaqo emidala kunayo yonke e-Napier. Njengoba izindlu zakhiwe ekuqaleni kuka-1845, ezinye zazo zisamile emgwaqweni namuhla.
Indlu ngokwayo yakhiwa ngo-1955 enkantolo yomdlalo webhola lomphebezo yendlu yasekuqaleni yomgwaqo we-Cameron (isamile ngemuva kwayo). Akuvamile ukuthola isigaba esicaba ngokuphelele eNapier Hill futhi izindonga zokuqala zenkundla yomdlalo webhola lomphebezo zisengabonakala.
Phezulu emgwaqweni kukhona i- 'Tiffen Park' eyayikade iyindawo & ikhaya le-Sto Stokes Tiffen, ubuwena owaziwayo emlandweni wokuqala we-Napier. Ukuhambahamba okufushane kuleli paki kukuyisa e-Central Napier.
Ezinye izindlela zabo zihlanganisa izindawo zokuhamba ezizungeze indawo yomgwaqo we-Cameron ezikuyisa edolobheni noma kwezinye izingxenye ze-Napier Hill.
We pride ourselves on providing superior Airbnb properties for our guests to enjoy. Please let us know if we can make your stay more enjoyable.
Izikhiye zibanjwa endlini futhi siyatholakala uma kukhona izinkinga zazo.